TOMS: A Case Study na Uru Na-akpata Marketing | Martech Zone
TOMS: Ihe omumu banyere ihe bara uru na ahia ahia
Fraịde, Ọgọstụ 23, 2013 Fraịde, Septemba 5, 2014 Douglas Karr
A mgbe gara aga, m na e dere arịrịọ site na nke a blog na- Kwụsị igbu Ihe na-akpata .zụ ahịa. Nsogbu bụ nsogbu ahụ na nsonaazụ a na-atụghị anya ya nke ndị ahịa nwere mgbe ụlọ ọrụ na-etinye mbọ ahịa ha maka azụmaahịa bara uru ma jiri uru na-abụghị uru ma ọ bụ ọrụ ebere na-agbasa ozi ahụ. Ndị na-emegide ahịa ahịa kwenyere na azụmaahịa na-eji obi ebere eme ihe n'ụzọ zuru oke… na ha kwesịrị inye ego ọ bụla n'ihi ịdị mma nke obi ha. Nsogbu m na nke ahụ bụ mgbe ụfọdụ ego anaghị adị -enyeMana enwere ike inweta ya ma oburu na itinye ego.
Ọ bụrụ na ị nụbeghị TOMS, ihe ị ga-eju gị anya n'ihi na-uru ụlọ ọrụ rụzuru n'ụwa. Kemgbe 2006, TOMS etinyela 10 nde akpụkpọ ụkwụ abụọ n'ụkwụ ụmụaka karịrị 60 mba. Kemgbe afọ 2011, TOMS nwere weghachiri ịhụ ihe karịrị 150,000 site na ịzụrụ nke TOMS Eyewear. Ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ 2014, ihe karịrị steeti 35 ebe a na US ga-anata karịrị 1,000,000 ụzọ abụọ nke akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ na anya a na-eweghachi na steeti 3 ugbua.
TOMS na-enye ụdị akpụkpọ ụkwụ 3:
Canvas Unisex Slip-Ons - ụdị ejiji zuru oke (nke yiri nke ndị ahịa na-azụ kwa ụbọchị); ụmụaka nwere ike ịhọrọ site na agba dị iche iche
Akpụkpọ ụkwụ egwuregwu - wuru maka mmega ahụ; gbakwunye mmemme anyị na-enye Ndị Mmekọ na-elekwasị anya maka oke ibu ụmụaka
Akpụkpọ ụkwụ oyi - A na-eji ajị anụ mee ihe, mmiri na-adịghị, mgbanwe kwesịrị ekwesị; wuru iji guzogide oke oyi.
Obodo TOMS enyerela aka ime ka otu echiche dị mfe bụrụ eziokwu dị ike. Otu dị ka Mmemme TOMS na-eme ka ụmụ akwụkwọ kọleji na United States tinye aka na ihe omume ndị na-akụziri ndị ọzọ gbasara ịzụ ahịa na ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Usoro mmemme anyị ahapụla ndị na-eto eto ndị ọzọ ka ha bụrụ akụkụ bara uru nke akụkọ anyị.
Ihe mmeghari ha bu otutu uzo, tinyere Otu ụbọchị na-enweghị akpụkpọ ụkwụ na Sbọchị Ọhụụ Worldwa ụbọchị anyị na-eme kwa afọ iji mee ka a mata maka nsogbu ụwa niile nke ịda ogbenye na nhụsianya na-enweghị ike izere na enweghị isi. Tiketi Nye na-enye gị ohere isonyere ha na njem na-enye ma kesara ụmụaka akpụkpọ ụkwụ TOMS n'ọhịa. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi tinye aka, Team Community ha nwere ọtụtụ echiche.
Nke a bụ nwata posta maka Akpata Azụmaahịa. Site n'ịnọgide na-aba uru, TOM enweghị ohere iji nyere aka, ha emeela ka ọrụ ha gbasaa. Uru ahịa ahịa emeela ka ha dịrịgide.
Tags: akpataakpata ahịaotu maka otuebumnuche ebumnucheebum n’ucheakpụkpọ ụkwụ toms
30 Statistics Statistics I Kwesighi Ichefu
Nchịkọta ịde blọgụ Blogconomy